Angry Birds ငှက် - Androidsis | Androidsis
Angry Birds ဂိမ်း
Angry Birds သည်ဖင်လန်အခြေစိုက်စတူဒီယို Rovio မှထုတ်လုပ်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဗားရှင်းအသစ်များထွက်ပေါ်လာခဲ့သောဤဂိမ်းသည် Android ထုတ်ကုန်များတွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်လာသည်။ ဒီဂိမ်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဤအမျိုးအစားတွင် Angry Birds အကြောင်းသတင်းများကိုသင်တွေ့ရမည်။ Android အတွက်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုသို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်သည့်သိလိုစိတ်များသို့မဟုတ်လှည့်ကွက်များအားလုံးနှင့်အတူပါ။ သင်ဤဂိမ်း၏ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ဤအမျိုးအစားကိုကြည့်ပါ။
Crush the Castle သည်ရဲတိုက်များကိုသင်ဖျက်ဆီးပစ်သည့်ပြည့်စုံသည့် "Angry Birds" ဖြစ်သည်
Castle the Crush - Siege Master သည် Angry Birds တစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်ရာပေါင်းများစွာသောရဲတိုက်များကိုဖျက်ဆီးပစ်ရသည်။
por ဟိုဆေး Alfocea လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
Angry Birds Blast သည် Rovio တီထွင်ခဲ့သော Candy Crush ကိုယ်ပွားဖြစ်သည်
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
Rovio ကပိုပြီးလိုချင်တယ်၊ Angry Birds နဲ့ဝေးကွာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မတူညီတဲ့ဂိမ်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ရလဒ်ကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။
Angry Birds Action ကိုယခု Download လုပ်ပြီး Rovio သစ်ကို Google Play စတိုးတွင်အခမဲ့ရနိုင်သည်
por Francisco Ruiz လွန်ခဲ့တဲ့6အနှစ် .
ဤရွေ့ကား Rovio အသစ်လုပ်နှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဝန်မှလာကြပါပြီ ...
Angry Birds ဂိမ်းလှုပ်ရှားမှု! ရွေးချယ်ထားသောဒေသများရှိ Android တွင်ယခုရနိုင်သည်
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့6အနှစ် .
Angry Birds2ကို Play Store တွင်ရနိုင်သည်
လရဲ့အလယ်လောက်မှာ Angry Birds2ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုငါတို့သိသွားတယ်။ ဒုတိယကနောက်ဆုံးရောက်လာပြီ။
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့7အနှစ် .
Angry Birds Fight သည်နတ်ဆိုးစွဲသောပဟေwithိနှင့်ကောင်းသောအချိန်ရရှိရန်ရောက်ရှိလာသည်
အဆိုပါ Rovio ယောက်ျားတွေကဒီမှာထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကူးနှင့်အတူဤအရပ်၌တဖန်ဤအချိန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး ...
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ Rovio ရဲ့အသစ်တီထွင်မှုတွေထဲကတစ်ခုနှင့်တစ်ခုရင်ဆိုင်နေရသည်။
Angry Birds အကြောင်းကိုအသစ်တဖန်တင်ပြခြင်း မှလွဲ၍ မသိသော Angry Birds အကြောင်းပြောဆိုရန်အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။